China FOTON C8 / C9 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Foton
N'ozuzu Dimension 9300 * 2450 * 3050/3150 (maka C9)
Oche ụkwụ 4560
Curb arọ 8.2T / 8.4T (na A / C)
GVW 12.2T / 13.2T (na A / C)
Njem / Njikwa ikike 84 / 10-37
Nhazi ahụ Ọkara-monocoque
Ntọala Ntọala Abụọ-nzọụkwụ / Low-ntinye
Ike mmanu 200L (Dizel) / 8 * 80L (CNG)
Ezubere ya maka obodo ndị pere mpe na nke ọkara, ọ na-egbo mkpa njem dị iche iche dịka ngalaba alaka obodo na njem ụgbọ ala. Ọhụrụ na ụdị mma mara mma, mara mma ma dị ọhụrụ, ọ na-eduga usoro ejiji ọha na eze.
Foton C8 / C9 dị iche iche ụgbọ ala obodo na-achọ ịnye ihe ngwọta na-agagharị agagharị na gburugburu ebe obibi na mmekorita na ịzaghachi mkpa nke ụgbọ njem obodo ugbu a site na imewe ahụ iji mezuo ya, na-ekwusi ike dị ukwuu na arụmọrụ kachasị elu, na-abawanye bọs Ogologo na ichikota ndu ndu ya.
Enwere oghere igwe eji eji mkpuchi ọkụ maka nyocha oge na ngwaọrụ na-agbanyụ onwe ya iji chọpụta nyocha oge; a na-etinye efere efere firewall iji hụ na nchekwa nke ọkwọ ụgbọ ala na ndị njem; a na-eji ihe na-eguzo ọkụ ọkụ na ihe ndị na-eguzogide ọkụ na-arụ ọrụ nchekwa ka mma gburugburu isi iyi ọkụ gị.
Ngwaahịa Foton na-agabiga nchọpụta ụgbọala siri ike na ịnwalegharị ihe karịrị 100 puku kilomita na ọnọdụ nke ụdị ụzọ dị iche iche na n'okpuru ọnọdụ ihu igwe kachasị njọ dịka oke okpomọkụ, obere okpomọkụ na obere nrụgide.
Foton kwadebere oche oche ndị ọkachamara yana egwu ule dị iche iche iji kwe nkwa ntụkwasị obi na arụmọrụ nke akụrụngwa na sistemụ ụgbọ ala Foton. Site na usoro siri ike ma sie ike, ụgbọ ala Foton na-eguzogide n'akụkụ na isi na nkwekọrịta na-egbochi ntanye mpụta. Tupu ha abanye na ọrụ, ha na-anwale ule na nkwenye siri ike.